\_'पोर्चुगलमा रहेका १५ हजार बढी नेपालीको हितमा काम गर्छु\_'
असोज २७, २०७४| प्रकाशित १०:४४
काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) पोर्चुगलमा एक कार्यकाल सचिव र दुई कार्यकाल महासचिवका रुपमा काम गरेका व्यक्ति हुन्, हेमन्त सेढाईं। सन् २०१५ को महाधिवेशनमा युरोप च्याप्टरको उपसंयोजकका प्रतिस्पर्धी उनी झिनो मतले पराजित भए। एनआरएनको ८औं महाधिवेशनमा उनले त्यही पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। युरोप च्याप्टरको उपसंयोजकमा पुनः दाबेदारी किन र निर्वाचित भएमा उनले के-कस्ता काम गर्नेछन्? नेपाल लाइभका लागि शिशर ढकालले सेढाईंसँग गरेको कुराकानीः
युरोप च्याप्टरको उपसंयोजक पदमा उम्मेदवारी किन?
गैरआवसासी नेपाली संघको मर्म समृद्धि मातृभूमि बनाउने हो। यो अभियानमा योगदान गर्नका लागि मैले दाबेदारी प्रस्तुत गरेको हुँ। यस्तै, युरोपमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा भोग्नुपर्ने समस्या र कामदारले आप्रवासनका क्रममा खेप्नुपरेका समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने मेरो उद्देश्य छ।
पोर्चुगलमा पनि नेपालीको बाक्लो उपस्थिति छ, उनीहरुको समस्या समाधानका लागि के गर्ने योजना छ?
युरोपमा बेलायतपछि सबैभन्दा धेरै नेपाली पोर्चुगलमा बस्छन्। त्यहाँ १५ हजारभन्दा बढी नेपाली छन्, उनीहरुको हकहितको पक्षमा निरन्तर काम गर्नेछु। त्यहाँ राजदूतावासको व्यवस्था अहिलेसम्म नहुँदा नेपालीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ। मेरो पहल अब पोर्चुगलमा दूतावास स्थापनाका लागि समेत हुनेछ।
एनआरएन पोर्चुगलमा रहेर तपाईंले नेपाली समुदायलाई पुर्याूउनुभएको योगदान के हो?
पोर्चुगलमा गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएदेखि नै म सक्रिय छु। एक कार्यकाल सचिव र दुई कार्यकाल महासचिवका रुपमा मैले काम गरेको छु। मेसिन रिडेबल पासर्पोर्ट लागू भएपछि हस्तलिखित पासपोर्टलाई एमाआरपीमा लिन समस्या थियो। हामीले हस्तलिखित पासपोर्टलाई एमआरपीमा रुपान्तरण गर्न हेल्प डेस्क राखेर धेरैलाई सहयोग गर्यौं।
त्यसको अलावा नेपाली कामदारको भिसा सम्बन्धी धेरै समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि समेत हामीले पहल गरेका छौँ। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा मैले पर्वतका हरीबहादुर जिसीको हत्या भएपछि उहाँको छोरीको स्नातकसम्म अध्ययन खर्च व्यहोर्ने भएको छु। यस्ता सामाजिक काममा समेत सक्रिय छु।
एनआरएनको महत्व र सान्दर्भिकता के छ?
मुलुकबाहिर रहेका नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीका समस्या समाधान गर्न र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याभउन गैरआवासीय नेपाली संघको महत्व र सान्दर्भिकता छ। यसको महत्व भएकै कारण ७७ मुलुकमा फैलिएको हो। समृद्ध मातृभूमि निर्माणका लागि यो संघ अत्यावश्यक छ। यद्यपि यसमा रहेका केही कमी-कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ।
एनआरएनका दुर्बल पक्ष के हुन्, जसको सुदृढीकरणमा तपाईंको योगदान आवश्यक छ?
यो संघ नितान्त गैरराजनीतिक, गैरजातीय र गैरक्षेत्रीय संस्था हो। तर, पछिल्लो चरणमा यसमा राजनीतिक, जातीय र क्षेत्रीय प्रभाव देखा पर्न थालेको छ। यी विषय विधान विपरीत हुन् र यस्ता कुरा निषेध हुनु जरुरी छ। अहिले देखिन लागेका त्यस्ता प्रभाव हटाउन सक्यौँ भने यो संस्थाको उचाइ र गरिमा अझै बढ्नेछ।
संघलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्न र यसको सुदृढीकरणका लागि म पहिले पनि सक्रिय थिएँ, अहिले पनि छु र भविष्यमा पनि रहनेछु।
एनआरएन धनीहरुको क्लब मात्र भयो भन्ने आरोप छ नि?
हरेक क्षेत्रका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन्। हामी समृद्ध मातृभूमि बनाउने अभियानमा छौँ। हामी गरिब भयौँ भने त त्यो अभियान कसरी सार्थक होला र? धनी त पक्कै बन्नुपर्छ। यद्यपि, एनआरएनले सबै वर्गका मानिसले अपनत्व महसुस गर्ने किसिमका काम गर्नुपर्छ।
एनआरएनमा अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ?
विदेशमा रहेका नेपालीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने, संघले अहिलेसम्म कमाएको साखलाई अझै उचाइमा पुर्यारउने र समृद्ध मातृभूमिको अभियानलाई सार्थक बनाउन प्रतिबद्ध साहसी, अनुशासित र कर्मनिष्ठ व्यक्ति संघको नेतृत्वमा आउनुपर्छ।
'बीसौं वर्ष फुटबलमा केही नगर्ने, अहिले परिवर्तनको नारा दिने?'
मन्त्री छनोटमा प्रधानमन्त्री गुटबाट प्रभावित हुनुभयो : योगेश भट्टराई